I-HandBrake 1.4.0 iza nokuphuculwa kwe-GUI, inkxaso ye-Apple M1 kunye nokunye | Ubunlog
I-HandBrake 1.4.0 ifika kunye nokuphuculwa kwe-GUI, inkxaso ye-Apple M1 kunye nokunye
Ubumnyama | 21/07/2021 00:26 | software
Ukukhutshwa kwe Inguqulelo entsha yokufundwa kweefayile zevidiyo ezininzi ukusuka kwifomathi enye ukuya kwenye IsandlaBrake 1.4.0, Uhlobo oluza emva kweminyaka emibini yophuhliso nalapho inani elikhulu lokuphuculwa lenziwe, kubandakanya ujongano lomzobo wesicelo, inkxaso yeApple M1, phakathi kwezinye izinto.
Kulungiselelwe abo bangaziyo ngale sicelo, kufuneka bazi ukuba injalo Ukulungiselela ukuguqulelwa kumakhowudi emininzi yeefayile zeaudiyo kunye nevidiyo, Esi sisicelo seplatform ezininzi ukuze sisetyenziswe kwi-OS X, GNU / Linux nakwiWindows..
HandBrake isebenzisa iilayibrari zomntu wesithathu, ezinje ngeFFmpeg kunye neFAAC. Ibhulo lesandla inokuqhubekeka neefayile zemultimedia eziqhelekileyo kunye nawuphina umthombo. Inkqubo inokuhambisa ividiyo kwi-BluRay / DVD, ikopi yesikhombisi se-VIDEO_TS kunye nayiphi na ifayile efomathi yayo iyahambelana ne-libavformat kunye ne-libavcodec zamathala eencwadi e-FFmpeg / LibAV. Iziphumo zinokuveliswa ngeefayile eziqulathiweyo ezinjengeWebMM, MP4 neMKV, AV1, H.265, H.264, MPEG-2, VP8, VP9 kunye neTheora codecs zinokusetyenziselwa ukufaka iikhowudi kwividiyo, kwiaudiyo- iAAC, MP3, AC -3, Flac, Vorbis kunye neOpus.
1 Eyona nto iphambili kwi-HandBrake 1.4.0
1.1 Uyifaka njani i-Handbrake kwi-Ubuntu kunye neziphumo ezivela kwi-PPA?
2 Uyifaka njani i-Handbrake kwi-snap?
Eyona nto iphambili kwi-HandBrake 1.4.0
Kule nguqulo intsha Uphuculo lwenziwe kwiinjini ye-HandBrake ukuxhasa i-10-bit kunye ne-12-bit encoding umbala ngamnye, kubandakanya ukuhanjiswa kwemethadatha ye-HDR10. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ayizizo zonke iifilitha ezixhasa i-10 kunye ne-12 bits.
Olunye lotshintsho olubonakalayo kukusebenza okwandisiweyo okunxulumene nokusetyenziswa kweendlela ze ukukhawulezisa izixhobo ze-Intel QuickSync encoding, AMD VCN kunye neQualcomm ARM, kunye nenkxaso yezixhobo zeApple ezisekwe kwi-M1 chip yongezwa.
Kwicandelo lohlaziyo lwekhowudi I-AMD VCN, apho a aukumiselwa komgangatho kwimowudi yolawulo lwevbr ethintelweyo ngu-VCN. Iziphumo ziyalingana okanye zingcono kunakwimowudi ye-cqp kwaye i-bitrate iqikeleleka ngakumbi kwaye iKubandakanywa ukulungiswa kwangaphambili kwe-H265 ye-1080p kunye nomxholo we-4K.
Uhlaziyo lweekhowudi lukwacacisiwe Intel QuickSync, apho a mUkuphuculwa kokusebenza kancinci ngokushiya i-VFR kunye nesihluzi / izihluzi zesikali xa zingafuneki kwaye ngakumbi kwi-gInguqulelo yenkumbulo ehlaziyiweyo ebandakanya ukuphucula ikopi yenkxaso apho kungasetyenziswanga iifilitha zesoftware, ekufuneka nayo iphucule ukusebenza.
Kwelinye icala kuyakhankanywa ukuba ubonelele ngesakhono sokusebenzisa iBrandBrakeCLI kwi izixhobo ezinee-chips zeQualcomm I-ARM64 Kuthunyelwe ngeWindows, kunye nokuphuculwa kokuphathwa kwemibhalo engezantsi, kunye ne-GUI iphuculwe kwiLinux, iMacOS kunye neWindows.
Ekugqibeleni, ukuba ufuna ukwazi ngakumbi ngayo, Ungajonga utshintsho olupheleleyo ngokuya ku kule khonkco ilandelayo.
Uyifaka njani i-Handbrake kwi-Ubuntu kunye neziphumo ezivela kwi-PPA?
Kulabo banomdla wokukwazi ukufaka le nguqulo intsha, banokuyenza ukusuka kwi-PPA yesicelo apho sinokufumana khona uhlaziyo lwesicelo ngokukhawuleza, kunokuba kuthelekiswa nendlela yangaphambili.
Kule nto siza kuvula i-terminal kwaye siza kwenza le miyalelo ilandelayo.
Sihlaziya uluhlu lwethu lwezinto zokugcina kunye:
Kwaye ekugqibeleni sifaka isicelo kunye:
Uyifaka njani i-Handbrake kwi-snap?
Ngoku ukuba awufuni ukongeza indawo yokugcina kwinkqubo yakho kwaye unenkxaso yokufaka usetyenziso kwifomathi ye-snap, ungafaka i-HandBrake ngoncedo lwale teknoloji, kuya kufuneka uvule i-terminal kwaye wenze lo myalelo ulandelayo:
Ukuba bafuna ukufaka inguqulelo yomgqatswa wenkqubo, benza njalo besebenzisa lo myalelo:
Ukufaka inguqulelo ye-beta yenkqubo, sebenzisa lo myalelo:
Ngoku ukuba sele unesicelo esifakelwe ngale ndlela, ukusihlaziya ngokwenza lo myalelo:
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubunlog » software » I-HandBrake 1.4.0 ifika kunye nokuphuculwa kwe-GUI, inkxaso ye-Apple M1 kunye nokunye
I-VirtualBox 6.1.24 iza nenkxaso yeLinux 5.13, izilungiso ezahlukeneyo kunye nokunye